Fihenam-bidy amin'ny fihenam-bidy amin'ny motro
Fihenam-bidy miverina amin'ny lozisialy
Ny fampihenana ny Gear
Mitadiava andalana feno amin'ny fampihenana Gear amin'ny Sogears
Safidy isan-karazany ho an'ny maotera motera 110 volt ac XNUMX phase ac.
Manolotra fihenam-bidy avo lenta avo lenta izahay ho an'ny sanda tsara indrindra. Mianara momba ny fiasana amin'ny motera fampihenana ny fitaovam-piadiana. ac motera fihenan'ny fitaovana elektrika, motera fihenam-bolo mahery, na motera mihena 110 volt aza, boaty fihenan'ny motera elektrika, motera DC miaraka amin'ny fihenan'ny fitaovana, Gearboxes Industrial & Reducers hafainganam-pandeha amidy, Raiso ny tolotra tsara indrindra, mifandraika amin'ny fanovana isan-karazany ny hafainganam-pandeha na ny herin'ny moto.
Manome vokatra avo lenta sy ambany vidy izahay. Safidy isan-karazany ho an'ny fitaovam-pitaterana motera. Ny môtô mihena ny fitaovam-piadiana dia afaka mampitombo ny takelaka avoakan'ny môtô.
AC Parallel AC Môtô
Manolotra 12V Gear Speed ​​Reduction Motor izahay, motera stepper reducer avo lenta miaraka amin'izao tontolo izao sns. AC Parallel Shaft Three Phase Gear Motor 155 RPM.
Vonona izahay ary miandry ny fiaraha-miasa avy amintsika. Helical-Worm Gear Reducer ankavanana maotera maotera rotisserie. Môtô Greartisan DC 12V 100RPM. 1/4 hp 230V Modely Telo Phase 4ZJ55.Tena safidy tsara koa amin'ny môtô DC. Ireo dia matetika ampiasaina amin'ny fampiharana automotika, anisan'izany ny winkhes herinaratra amin'ny kamiao, ny môtô-drivotra manidina, ny seza ary ny fikapohana herinaratra.
Ndao aloha hiresaka!
Amin'ny maha mpanamboatra motera fampihenana ny fitaovana, dia manome loharanom-pahefana elektrika DC izahay ary ampiasaina amin'ny fampiharana hafainganana hafainganam-pandeha toy ny seza misy kodiarana, fandriana hopitaly, fiakarana ary latabatra fitsaboana, seza herinaratra, sy ny hafa. Avy amin'ity andian-dahatsoratra maotera kely ity izay manana motera 40W-15.5kW. mankany amin'ny reducer gear helical karazana axis parallise miaraka amina motera 0.1kW-45kW.
Raha manana ny vokatra tianao indrindra ianao dia avia hifandray aminay! Vonona izahay ary manantena ny fiarahamiasa ataonay. Manamboatra reducers fitaovana izahay mba hampitomboana ny herinaratra ary hampihenana ny hafainganam-pandehan'ny motera elektrika. Raha manana fanontaniana ianao, afaka mifandray aminay ianao, faly izahay manampy anao!